Shenzhen BoRun Electronics Co., LTD kuyinto Umkhiqizi ka C lwe-USB HUB, C lwe-USB CABLE, Wireless ishaja kusukela 2013, RD ikhono eqinile, okuholela supply chain imithombo, e-izindlu ifektri luhlobo lisenze sikwazi ukunikela umlingani OEM & OBM & ODM isevisi MOQ ukucabangela futhi yokuncintisana intengo.
Nakuba kudingeka ukuba ngobuningi ukuthengisa umkhiqizo wakho ku marketing lapha sinawo ifektri siqu ukukhiqiza imikhiqizo yakho, ukuphatha izinga, kuyilapho kudingeka ngezifiso ezinye imikhiqizo esiye sabhekana onjiniyela ngawe. sizwa imibono yakho bese wabelana isiphakamiso lethu lokusebenza ndawonye. Siyabonga kakhulu nekhono lokushintsha izakhi, izimboni, amapulazi akhiqiza ukuhlolwa kwethu amakhono lesekela sibe umuntu-stop isixazululo umhlinzeki nge idumela eliphezulu ekukhangiseni.
Kuyinto Lucia owathweswa iziqu Shenzhen University Degree esiphezulu ku Marketing, kusukela 2014 Lapho Ngajoyina Macverin futhi babejabulela ngamaqembu kanye ukuphila kanye nosebenza nabo yami ikakhulukazi obhekene wokwakha brand kanye nekwendluliselwa ebangeni lelilandzelako. Uma udinga noma yiluphi ucwaningo ukumaketha noma ulwazi sicela ukukhuluma nami.
Kuyinto-Eunice owathweswa iziqu Shenzhen University nge degree esiphezulu ku ibhizinisi English, Ngiyakuthanda English ukufunda namasiko ehlukene izwi okubanzi, kusukela 2013 Ngajoyina Macverin mina ephethwe amakhono athile futhi ukwazi ukuthi ukunikela okungcono add-amanani kumakhasimende, ngizenze ngibe ngangoPhezukonke lapha nethimba lami ukunikela 24 * 7 service esheshayo.
Kuyinto uPawulu owathweswa iziqu Hunan Engineering Technology waseyunivesithi e-electronics, ngachitha sonke isikhathi sami sokuba ngifunde Apple imikhiqizo kanye izitayela ngoba ngingumuntu super fan, imibono lapho ngisebenza e Macverin mina njalo ukuqamba for umkhiqizo omusha, kuthatha lula kakhudlwana kubasebenzisi ukuphela ngoba ngiyazi izifiso zakho.
Kuyinto Gavin elisebenza designer of Macverin, Ngiyakuthanda ukudweba, umculo kanye nomklamo, izwe kuyintfo lenhle kakhulu futhi ngilandela inhliziyo yami ukuba tast zonke izikhathi, ukuhlobisa zonke izinto ngezandla futhi izingqondo, e Macverin sinikeza wena iphakethe khulula nokumaketha nezinto eziklanyiwe nge MOQ ocabangelayo, ngingubani izandla zakho 3rd njengokwenza isipele.
YETHU ADD- VALUE SERVICE
Sine siqu imodeli plastic making kanye izingxenye umjovo ifektri .Le yethu kusheshiswe ODM ukulethwa isikhathi ozakwethu.
Rich umnyango RD abanolwazi futhi umphathi ukumaketha umkhiqizo lisenze sikwazi ukunikela esiyingqayizivele lobunikazi design iziphakamiso abalingani bethu.
Original e-izindlu yokukhiqiza ikhono lisenze sikwazi ukunikeza high quality iziphakamiso abalingani.
100% izinga ukuhlolwa ngaphambi kokubeletha kanye izinga yethu engaphelele esingaphansi 0.3%.
24 ngu-7 ngesikhathi sangempela oyi-emva yokuthengisa service uqiniseke uthole usizo ngaleso sikhathi.